Itoobiya: Ugu yaraan 600 oo qof oo lagu diley xasuuqii Mai Kadra | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya: Ugu yaraan 600 oo qof oo lagu diley xasuuqii Mai Kadra
Itoobiya: Ugu yaraan 600 oo qof oo lagu diley xasuuqii Mai Kadra
Itoobiya-(Berberanews)-Ugu yaraan 600 oo qof oo rayid ah ayaa lagu diley xasuuq qowmiyadeed horaantii bishan magaalada Mai Kadra oo ka tirsan gobolka Tigreega ee Ethiopia, hay’adda xuquuqda aadanaha ee dalka ayaa sheegtay baadhitaan kadib.
Tigreega waxaa ka dhacay dagaallo culus tan iyo 4tii Nofeembar, markii Raiisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu bilaabay weerar ka dhan ah dowlad deegaanka ka dib markii la sheegay in ay weerareen ciidamada amaanka ee Tigreega oo ka dhan ahaa fariisimaha militariga ee dowladda dhexe ee gobolka waqooyiga.
Tan iyo markaas, macluumaadka way adkayd in la helo oo la xaqiijiyo, iyadoo la jaray isgaadhsiintii iyo marin u helida Tigray oo si adag loo xakameeyay.
Labada dhinacba waxaa lagu eedeeyay inay geysteen gaboodfallo ka dhan ah dadka rayidka ah, iyadoo la rumaysan yahay in kumannaan qof la dilay illaa hadda, tobanaan kunna ay ku barakaceen.
Dilalkii ka dhacay Mai Kadra 9-kii Nofeembar waxaa markii ugu horreysay soo sheegay hay’adda u doodda xuquuqda ee Amnesty International saddex maalmood ka dib, taasoo dhalisay cabsi laga qabo in dambiyo dagaal la galo iyadoo dagaalku sii xoogeystay.
Bishii Nofeembar 14, Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) wuxuu u diray gobolka khuburo koox baadhitaan ku socota oo socotey illaa 19-kii Noofambar.
Maalintii salaasada, dowlada ayaa magacaawday laakiin hay’ada madaxa banaan ayaa sheegtay inay ogaatay in dilka ay fuliyeen koox dhalinyaro ah oo deegaanka ah oo lagu magacaabo Samri, iyadoo ay taageerayaan shacabka kale ee Tigreega ah, booliska iyo maleeshiyada.
Previous articleWararkii u danbeeyay ee Roobab saacado badan ka da’ayay Gobolka Saaxil
Next article8 killed after tropical storm makes landfall in Somalia